PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-03-25 - Zibuya ngezinkani izikhwama zakudala
Zibuya ngezinkani izikhwama zakudala
Ilanga langeSonto - 2018-03-25 - Front Page -
IZIKHATHI zifika zedlule njengoba kwenzeka nasemfashinini. Ngubani owake wacabanga ukuthi izikhwama esasiziphatha sikhula, sidayisa ngazo oswidi esikoleni zingaphinde zibuye? Ngikhuluma ngalezi zikhwama ezincanyana eziboshelwa eqolo esezibuye mawala futhi esezisesitayeleni. Lezi zikhwama bezi-
jwayele ukubonakala kakhulu kuma- tourist noma emalokishini kubantu abazidayisela emgwaqeni kodwa muva nje seziyi- accessory yomntakabani. Lolu hlobo lwesikhwama olwaziwa nge- fanny bag, lubuye lwangena lwathi shi emfashinini okungukuthi kalusafakwa okhalweni kuphela kodwa uyakwazi ukuba ulugaxe ehlombe bese luhamba ngaphambi kwesifuba. Amalebuli abizayo afana nogucci nolouis Vuitton, Prada, Channel asenazo.
Okuhle ngale trend:
I-fanny bag kayikho sporty kuphela kodwa uyakwazi ukuba uyigaxe uma u- formal, mhlawumbe uma ugqoke i- suit noma i- evening dress.
Iyashintsheka, ukwazi ukuba uyifake okhalo, ehlombe noma ivundle emzimbeni ( cross body). Uma uthanda ungasitebhisa (lesi sikhwama) siye ezansi kakhulu, singahlali eqolo. Uma uthanda ungawaqinisa ama-bhande ukuze uveze ukhalo lwakho.
Isiza izandla zakho ukuba zikwazi ukukhululeka usuku lonke futhi ingasetshenziswa ngabantu bobulili obehlukene.
Ungayifaka ne- cargo short nama- sandal namasokisi ngoba uzobukeka njengesivakashi.
Zama uhlobo lwezindwangu olu- fancy njenge- leather, velvet noma isatin nendlela ehlukile yokuma kwaso okungaba yi- rectangle noma i- circle.
U-ENHLE Maphumulo efake esakhe isikhwama segucci.